Wararkii ugu dambeeyay xiisada Ethiopia iyo Sudan. - Ogaden24 | Ogaden24
Wararkii ugu dambeeyay xiisada Ethiopia iyo Sudan.
Apr 7, 2021 - Aragtiyood
Waxaa fashil kusoo dhamaaday wada haddaladii saddex geesodka ee dalalka Itoobiya, Sudan & Masar u socday.
Diyaaradaha dagaalka ee dalalka Sudan iyo Masar dhoolatus wadda jira ku sameeyay hawada saree Nile-ka, waxaana lasoo bandhigay muuqalo ay dul hee’haabayaan wabigan muranka baddan ka taagan yahay.Labbadan dal ayaa iskaashi milatari oo xoogan horay usameeyay.
Itoobiya ayaa war saxafadeed soo saartay kaddib wadda haddaladii saddex geesodka ee fashilmay. Itoobiya waxay sheegtay innaysan jirin awood kahor istaagi karta innay buuxiyaa wajiga labbaad ee biyo xidheenka Abay, Itoobiya waxay sharci darro ku tilmaantay doodaha Sudan & Masar ee odhanaya waa in la heshiiyaa intaan biyo xidheenka la buuxinin. Madaxwaynaha Masarna wuxuu horay uga digay in la bilaabo buuxinta wajiga labbaad, isagoo sheegay innuu bilaaban doono dagaal gobalka saameya, haddii talabadaas lagu kaco.
Sudan ayaa Qaramada middoobay usoo jeedisay in ciiddamada Itoobiya laga saaro dalkeeda.Wasaarada arrimaha dibada Sudan ayaa sheegtay innaan lagu kalsoonaan karin afarta kunee(4000) dalkaas nabbad ilaalinta ugu sugan, loona baahan yahay innay degdega uga baxaan. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa xili wadda haddaladii saddex geesodku fashilmeen.
Iskusoo duubo xiisada biyaha ee dalalka Sudan, Masar iyo Itoobiya ayaa halkii u xumayd maraysa, waxaana laga cabsi qabaa dagaal ka dhex qarxa.